Sida loo geliyaan music in Spotify ama ku darto heesahaaga Spotify
Spotify waa adeeg music geeyo ogolaanaya in user si aad u hesho sida ugu fiican oo gobolka ka mid ah muuqaalada tahay gudahood codsiga ah in la soo saaro isla ujeeddadaas. Laakiin waxaa la ogsoon yahay in ay aad u yar oo isticmaala in la isticmaalayo codsigan user sidoo kale hubin karaa in in music la keeno si ay adeega oo ku riyaaqay si la mid ah sida music geeyo yahay iyo sabab la mid ah habkaani waxaa loo isticmaalaa ay users on scale kooban. Tutorial Tani waa dhan oo ku saabsan hagaajinta gaadhista user ee la xiriirta songs geliyaan si ay u Spotify.
1. Waa maxay sababta ay u geliyaan songs on Spotify
2. Sida loo geliyaan songs on Spotify
Waa maxay sababta ay u geliyaan songs on Spotify?
Waxaa jira sababo badan si ay u hubiyaan in songs waxaa uploaded adeega iyo hoos ku xusan yihiin qaar ka mid ah, kuwaas oo si faahfaahsan u weyn si loo hubiyo in user marnaba xun ee go'aanka ka mid ah uploading gabayadii on Spotify:
1. music ah in la soo uploaded in app ayaa sidoo kale la wadaagi karto dad kale oo sidaas daraaddeed gaadhista ee isticmaala ayaa sidoo kale kordhisaa in arrintan la xiriira. Waxaa jira links ee Facebook iyo Twitter iyo weliba in la hubiyo in user marnaba leeyahay in ay soo booqdaan saaxiibo si loo hubiyo in macluumaadka loo dhiibaa. Just by uploading song in ay app waa inuu xaqiijiyo in user ayaa qabtay shaqo ee style iyo fasalka iyo sidoo kale xiriir la soo diri karaa si aad u hesho heesta bixi hab fudud.
2. Spotify waa inuu xaqiijiyo in awoodda warbaahinta bulshada waxaa qabsaday hab fiican oo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user wuxuu hubinayaa in in ugu fiican iyo gobolka of music tahay in la soo uploaded degaanka la wadaago tayada iyo fasalka. Facebook waa ka ugu weyn ee warbaahinta bulshada madal dunida iyo sabab la mid ah waxaa sidoo kale ku jira guddiga in la hayo ay Spotify iyo sidaas user ay u baahan tahay in la hubiyo in ugu fiican iyo gobolka of music tahay doorashada u gaar yahay uploaded iyo riyaaqay by dadka wax la wadaago.
3. Awoodda maktabadda music kordha user iyo sabab la mid ah heeso badan waxaa lagu daray oo aan ka kaaftoomi qudhaanjada iyo arrinta. Habkaani sidoo kale u ogolaataa user si loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah muuqaalada tahay aan ku riyaaqay kaliya laakiin music degaanka ayaa sidoo kale uu noqonayaa qayb ka mid ah gabayada Spotify in qoran yihiin online oo ka mid ah hawlihii ay sidoo kale khuseeyaan music in ayaa laga keeno.
4. Waxa kale oo aannu hubinno in aan kaliya user laakiin xubnaha kale iyo sidoo kale saaxiibada ay yihiin kuwa badbaadayaa ka kaaftoomi doono baarayaan track gaar ah. Marka user ka dalbaday in track ah iyo haddii ay tahay deegaanka laga heli karaa waa la uploaded karo oo la wadaago oo aan wax arrintan iyo dhibaatada si loo hubiyo in kuwa kale ay ku badbaadi ka kaaftoomi doono of duuban oo qabsaday music in uu yahay dhibaato ah mararka qaarkood.
5. kuwan raadkaygay in ay yihiin uploaded in codsiga sii aamin oo xasiloon oo ay dhacdo in nidaamka shil rakibaadda daaqado, ma heshiis weyn si aad u hesho ururinta music oo dhan mar kale soo degsado tareenka ka codsiga. Sidaas ay tahay in la xuso in dadka isticmaala ay awood u yeelan doonaan in ay helaan qaababka ugu wanaagsan iyo hadda ma jiraan wax u baahan si aad u hesho ka walwalsan tareenka oo dhan ay ku jiraan gacmaha ugu fiican ee warshadaha.
Beddelka adduunka music ah
Muuqaaladan in lagu gundhig gudahood Spotify waa inuu xaqiijiyo in uu noqdo mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo adeeg music ugu doonayo ee jeer oo dhan. Waxaa sidoo kale in la xuso in dadka isticmaala ay dhegaysan kartaa music ku saabsan go iyo xarunta kaliya ee loo baahan yahay in arrintan la xiriira wax xidhiidh ah oo internet firfircoon iyo inta kale ayaa si fudud u samayn oo aan ka kaaftoomi kasta. Waxaa sidoo kale in la xuso in user wuxuu hubinayaa in in ugu fiican iyo kan gobolka ee adeega farshaxanka oo uu soo bandhigay qaab haddii Spotify waa calaamad ka mid ah oo tayo leh, fasalka iyo farxad user oo ku taala ee muhimka ah ee functionalities bixiyeen shirkadda arrintan la xiriira.
Sida loo geliyaan songs on Spotify?
Si loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah muuqaalada tahay waxaa ku riyaaqay user u baahan yahay si loo hubiyo in talaabooyinka soo socda ayaa la codsatay in si la mid ah sida ku xusan:
1. user wuxuu u baahan yahay in login app Spotify:
2. Jidka in uu yahay in la raaco waa Edit> door bidaan in ay ku talaabsato dheeraad ah ee arrintan la xiriira:
3. Doorashada files deegaanka ka dibna waa la baaraayo, waayo, sida ka muuqata sawirka hoos ku qoran:
4. il badhanka dar waa ka dibna in la riixi:
5. user ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in faylasha lagu daray ka furmo suuqa in booda ka xariiqday in doorashada sida rabitaan iyo tan ayaa sidoo kale ka baxayo geedi socodka ee buuxa:
> Resource > Music > Sida loo geliyaan Music inay Spotify ama dar Songs in Spotify